China Soft PVC Ipensile Toppers mveliso kunye nabenzi | SJJ
Iipensile zizixhobo zokubhala, ukuzoba okanye ukwenza indalo, iipensile ezithambileyo zepensile ze-PVC zizixhobo zokwenza ukubhala kwakho, umzobo wakho kunye nendalo yakho inomdla ngakumbi kwaye igqibelele.
Iipensile zizixhobo zokubhala, ukuzoba okanye ukwenza indalo, ithambile Ipensile yePVCzizixhobo zokwenza ukubhala kwakho, umzobo wakho kunye nendalo yakho inomdla ngakumbi kwaye igqibelele. Ayisiba bantwana kuphela kodwa nabantu abadala bayawathanda amanani amnandi ayilwe ziimpawu ezinkulu ezaziwayo njengeDisney nabanye. IthambileIpensile yePVCunokwenziwa kula manani mahle ngobukhulu obahlukeneyo, iimilo kunye nemibala. Zisetyenziswa njengezipho zonyuselo, njengezikhumbuzo, umhombiso, intengiso njalo njalo. Abathengisi abancinci be-PVC babhengeza imiphefumlo edumileyo kakuhle, kwaye bakhusela iipensile kunye nomsebenzisi ngokunjalo. Ezinye iipilisi zepensile ezithambileyo ze-PVC zinomsebenzi wokucima. Banceda abasebenzisi ukuba bacoce ukubhala, ukuzoba kunye nayo nayiphi na indalo kakuhle, kwaye babenze bagqibelele ngakumbi.
Imilo, uyilo kunye nobukhulu ngabathengi zamkelwe. Siza kwenza umsebenzi wobugcisa wemveliso ekuvunyelweni kwakho ngaphambi kweesampulu okanye imveliso, zama konke okusemandleni ukubonisa iinkcukacha ngeziphakamiso zobungcali, kunye nokuzabalazela ishishini ngakumbi kuthi sobabini.
Motifs: I-Die Struck kwi-3D epheleleyo, uyilo kunye nobungakanani bunokwenziwa.
Ukugqiba: IiLogo zingaprintwa, zibhalwe, i-Laser ikrolwe njalo njalo
MOQ: iiPC ezingama-500 kuyilo ngalunye
Egqithileyo Iimagnethi eziLuhlaza zePVC
Okulandelayo: Iimbasa zePVC ezithambileyo
Umbala weepensile zombala